vivo Y1s丨vivo Myanmar
Y1s တွင် ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည် ဖုန်းတစ်ခုလုံး၏ ၈၈.၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ၆.၂၂ လက်မ Halo FullView ™ Display ပါရှိသည်။ ဗီဒီယိုများနှင့်ဂိမ်းများ ဆော့သည့်အခါတွင်လည်း စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ခံစားချက်ကိုပေးသည်။ ဒါ့အပြင် Y1s သည် မျက်စိညောင်းညာမှုကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသောအပြာရောင်အလင်းတန်းကို စစ်ထုတ်ပေးသည်။
စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ 3D ကိုယ်ထည် curves နှင့်အတူ Y1s ကို လက်နှင့်ကိုင်တွယ်ရ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် ပြုလုပ်ထားသည်။ အထူ 161g နှင့် 8.28mm ရှိပြီး ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်း ပါးလွှာမှုကြောင့် လက်တဖက်တည်းဖြင့် ကိုင်တွယ်ရန် လွယ်ကူစေသည်။
သဘာ၀တရား၏လှပမှုဖြင့် ညှို့ယူဆွဲဆောင်နေသည့် Aurora Blueသည် ရေခဲမြစ်များအရည်ပျော်ရာမှ ကြီးမား‌ကျယ်ပြန့်သောသမုဒ္ဒရာကြီးအတွင်းကို စီးဝင်တွေ့ဆုံကြသည်ကို အကြောင်းပြုပြီး ရရှိလာသော စိတ်ကူးဖြစ်သည်။ အဖြူ၊ အပြာနှင့်ခရမ်းရောင် ဟူ၍ အရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ရောစပ်ထားပြီး ကြည်လင်အေးချမ်းခြင်း၊ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းခြင်းနှင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ခြင်း စသော ခံစားချက်တို့ကို ရရှိကြစေရန် ဖန်တီးထားသည်။ ပါးလွှာသော 3D ကိုယ်ထည်အခုံးသည် ပိုမိုလှပကြော့ရှင်းပြီး ၎င်း၏ပါးလွှာမှုက ကိုင်ဆောင်ရာတွင် သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။
Olive Black သည် သစ်တောများမှ စိမ်းလန်းစိုပြေခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်နှင့်အတူ ပရီမီယံအရောင် ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်နှင့်တကွ အနက်နှင့်စိမ်းပြာရောင်အရင့်တို့ပါ ရောနှောနေပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
vivo ၏ အထူးသီးသန့် အလှအပ အသားပေးသည့် ပိုပြီးကောင်းမွန်သော အသားအရည်နှင့် အသားအရောင်အမျိုးမျိုးအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည့် ​ရွေးချယ်စရာများကို ပေးထားသည်။ ပိုပြီးသဘာ၀ကျကျ လှပခြင်းနှင့် မိတ်ဖွဲ့လိုက်ပါ။
Y1ရဲ့သီးသန့် Smart Power စီမံခန့်ခွဲမှုက ထောက်ပံ့ပေးထားသော 4,030mAh ဘက်ထရီသည် ပိုမို​​ကောင်းမွန်​စွာ ဂိမ်းကစားရန်နှင့် ဗီဒီယိုကြည့်ရန်တို့အတွက် ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်ရန် ထိန်းသိမ်း​ပေးသည်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပူပန်ခဲ့ရမှုများကို အတိတ်မှာသာ ထားရစ်ခဲ့လိုက်ပါ။
32GB internal ROM သည်ဓာတ်ပုံများ၊ ဖိုင်များနှင့် application များကို သိမ်းဆည်းရန် အတွက်ပေးသည်။ Y1s များသည် SD card နှင့်အတူ 256GB အထိတိုးချဲ့နိုင်ပြီး အံ့အားသင့်စရာများစွာဖြင့် သင်၏ကမ္ဘာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
* ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်အထောက်အပံ့အတွက် Micro SD ကဒ်ကိုသီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။
* အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော ROM သည် 32GB ထက်နည်းခြင်းမှာ operating system နှင့်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော app များသိုလှောင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
vivo သည် Y1s ဖြင့် Face Access ကိုမိတ်ဆက်​ပေးပြီး ၎င်းသည်သင်၏မျက်နှာကို မှတ်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် သင်၏ဖုန်းကို unlock ဖွင့်သည်။ သင့်ဖုန်းကို ခုလို unlock ဖြည်ရခြင်း​လောက် ဘယ်သောအခါကမျှ စမတ်ကျခဲ့ဖူးမည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ဖုန်းကို unlock ပြုလုပ်ခြင်းသည် နောက်ဘက်လက်ဗွေစကင်နာဖြင့် ပိုမိုအဆင်ပြေ လွယ်ကူစေသည်။ သင် ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုံခြုံမှုဖြင့် သင့်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူစေလိုက်ပါ။
Settings ထဲရှိ feature အသစ်သည် screen animations များကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်စရာများစွာပေးသည်။ သင်၏ ဖုန်းကို unlockဖွင့်ခြင်း၊ သင်၏ မျက်နှာကိုမှတ်မိခြင်းနှင့် အခြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများစွာ ပြုလုပ်ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ညဉ့်နက်သည့်အခါ အမှောင်ထုဖြစ်နေသည့်နောက်ခံသို့ပြောင်းပါ။ ဘက်ထရီသက်တမ်း ကြာရှည်ခံပြီး ကြည့်ရတာ ပိိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
1. ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဓာတ်ပုံရလဒ်များနှင့် သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံများအတွက် မတူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် မတူကွဲပြားသော pixel ရှိ ဓာတ်ပုံများကို ထုတ်လုပ်ပေးပါမည်။
2. ယခု ပါဝင်သော ပုံသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး display screen ပေါ်တွင် ပြထားသည့် ဓာတ်ပုံသည် ပုံဖော်ပြသရန် ရည်ရွယ်၍ ကိုယ်တိုင် တီထွင်ထားသည့် ဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ စံထားရှိထားသည့် ပြင်ပဓာတ်ပုံများကို ရယူနိုင်ပါသည်။
3. ယခု ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်အားလုံးသည် နည်းပညာဒီဇိုင်းပညာရှင် တိုင်းတာမှုများ၊ သုသေသန စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက် ရလဒ်များနှင့် supplier များ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ စွမ်းဆောင်ရည်သည် software version ၊ specific test environment နှင့် phone model များအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲလွဲသွားနိုင်ပါသည်။ ယခုစာမျက်နှာရှိ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြချက်များသည် vivo ထုတ်ကုန်များကိုသာ ရည်ညွှန်းပါသည်။
4. ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဖော်ပြချက်များကို vivo မှ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အချိန်မရွေး ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်များကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။
5. မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားမှာ ထောင့်ဖြတ် တိုင်းတာထားခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ထောင့်မှန်အပြည့်မှာ ၆.၂၂ လက်မဖြစ်ပြီး ထောင့်ချိုးအကွေးများ ထည့်သွင်းတိုင်းတာပါက ၆.၀၂ လက်မရှိပြီး အနည်းငယ် သေးငယ်သည်။